Extra-ububanzi extrusion Ukwaleka & Lamination Machine - China Qingdao Shicheng Plastic
ebhodini zeplastiki sheet ...
ngeso lenyama & lamination ...
Extra-ububanzi extrusion Ukwaleka & Lamination Machine
Classicx Series Extra-ububanzi extrusion Ukwaleka kunye wokulaminetha Line yinto eyenziwe, imveliso eliphezulu phakathi kunye umatshini ekupheleni hi-yenzelwe yi FEEC. Lo matshini yenzelwe kwaye zaphengululwa ubugcisa, esebenzisa PE / PP njengoko izinto ekufuneka isale ngaplastiki ngeplastiki ephothiweyo ilaphu. It is a izixhobo eliphezulu-komsebenzi ukwenzela ukuvelisa iimveliso ilaphu extra-ngokubanzi. Ezezicelo: Yaziwa ngokubanzi kusetyenziselwa ukuvelisa amalaphu zeplastiki ephothiweyo extra-ngokubanzi afana amalaphu selanga, tarpaulin, amanzi-nobungqina amalaphu, geo ...
Classicx Series Extra-ububanzi extrusion Ukwaleka kunye wokulaminetha Line yinto eyenziwe, imveliso eliphezulu phakathi kunye umatshini ekupheleni hi-yenzelwe yi FEEC. Lo matshini yenzelwe kwaye zaphengululwa ubugcisa, esebenzisa PE / PP njengoko izinto ekufuneka isale ngaplastiki ngeplastiki ephothiweyo ilaphu. It is a izixhobo eliphezulu-komsebenzi ukwenzela ukuvelisa iimveliso ilaphu extra-ngokubanzi.
Oku esisetyenziswa ngokubanzi ukuvelisa amalaphu zeplastiki ephothiweyo extra-ngokubanzi afana amalaphu selanga, tarpaulin, amanzi-nobungqina amalaphu, geotextiles, heavy-umsebenzi ukupakisha ngelaphu, ibhena flex, njl ububanzi Ubuninzi ungaba kuze 6200mm.
ulwenziwo Flexible ukwazi ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo abathengi.
Lo matshini isebenzisa phezulu-uhlobo extruder, kwaye amkele izakhiwo ezahlukeneyo ngokweemfuno imveliso ezahlukeneyo.
extruder ezimbini ibe yingxubuwa kufa onokufikelela wokulaminetha kwicala kabini kwinkqubo enye;
Oko Axhotyiswe squeezer kabini-icala kunye yomile njengoko iindlela ukuvelisa amanzi-jet iimveliso igumbi ilaphu.
Corona umcoci kunye neyunithi yoshicilelo iindlela ukuze imveliso abafuna uphawu yoshicilelo nepatheni emva wokulaminetha
Eli candelo lamination unako mayixhotyiswe ezintathu calender mqengqeleki, kufanelekile ukuba zivelise ezibanzi ne max. Ukutyeba ukuba 3mm;
Isantya wokulaminetha unako ukufikelela 150m / min ngokweemfuno zabathengi.
Ububanzi Lamination mm 2500-3100 3600-4100 3000-4300 5000-6100
Lamination Ubukhulu um 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10
Mechanical Line Speed m / min 20-200 20-200 20-150 20-200
Screw Ububanzi, L / D mm Φ120 × 33 Φ150 × 33 Φ180 × 33 Φ200 × 33
T-Die Length imilebe mm 3250 4250 4600 6250
Max.Unwind / emuva roll Ububanzi mm 1200 1200 1200 1200
Power Total Township 210 350 400 420
oQhelekileyo oSetyenziswa Air M 3/ min 0.8 1.0 1.2 1.2
apholisayo Amanzi M 3/ min 0.8 1.0 1.2 1.2
Weight Total ton 34 46 55 65
Ubukhulu Line (L × W × H) m 12 × 18 × 4.5 14 × 20 × 4.7 14 × 22 × 5 15 × 23 × 5
Previous: Extrusion Ukwaleka & Lamination Machine
Next: Ezine umatshini wokushicilela lombala
Ngeso lenyama Ke Lamination extrusion Line
Ngeso lenyama And Lamination Line
Ngeso lenyama And Lamination Lines
Ngeso lenyama And Lamination Machine
Ngeso lenyama And Lamination Machinery
Ngeso lenyama Ke Lamination Production Line
Extra-Ububanzi extrusion Ukwaleka Ke Lamination extrusion Line
Extra-Ububanzi extrusion Ukwaleka And Lamination Line
Extra-Ububanzi extrusion Ukwaleka And Lamination Lines
Extra-Ububanzi extrusion Ukwaleka And Lamination Machine
Extra-Ububanzi extrusion Ukwaleka And Lamination Machinery
Extra-Ububanzi extrusion Ukwaleka Ke Lamination Production Line
Extrusion Ukwaleka Ke Lamination extrusion Line
Extrusion Ukwaleka And Lamination Line
extrusion Ukwaleka Ke Imigca Lamination
Extrusion Ukwaleka And Lamination Machine
Extrusion Ukwaleka And Lamination Machinery
Extrusion Ukwaleka Ke Lamination Production Line
Extrusion Ukwaleka & Lamination Machine
Ezine umatshini wokushicilela lombala